Ugwu 10 kacha elu na uwa 10 ugwu kacha elu na uwa | Akụkọ Njem
Anyị niile maara ihe ọ bụ Ugwu kachasị elu n’ụwa… Ma, olee onye n’ime anyị maara nke bụ ugwu nke abụọ ma ọ bụ nke atọ ma ọ bụ nke anọ kachasị elu n’ụwa? Ukwuu bu ihe nile, ma obula opekata mpe na uwa a nke ji ihe on’anya ma dabere na oganihu anyi aghaghi ibi.
Mana n'ezie, enwere ụwa nke ugwu dị n'azụ Ugwu Everest, ugwu kachasị elu n'ụwa, ma kwere ya ma ọ bụ ugwu iri kachasi elu n’elu uwa nile di na Asia. Ànyị maara ya?
1 Ugwu Everest
2 Ugwu Karakoram
9 Nke Parbat
Ugwu Everest Ọ dị mita 8.848 dị elu ma dị na Himalayas, na Tibet, mpaghara kwụụrụ onwe nke China. Ndị Europe izizi rịgoro ya bụ Tenzing Norgay na Sir Edmund Hillary, na 1953.
Everest nwere akwụkwọ, mkpokọta foto, na ọbụna ihe nkiri. N'oge a, enweghị foto ndị ahụ na-ekwupụta na elu ya abụrụla ihe dịka Mecca. E nwekwara ọtụtụ ndị mmadụ na-akwụ n’ahịrị iji ruo ebe ahụ nke na ọ tụrụ ụjọ!
Kwa afọ, n'afọ ịrị, ndị mmadụ na-esite n'akụkụ ụwa niile bụ ndị na-achọ ijikọ ọnụ, oge ụfọdụ na-enwe ihu ọma na oge ụfọdụ ọ bụghị, Base Camp na nke elu. Ndị na-adịghị elu dị elu ka na-enwe ọ theụ na njem na-agwụ ike n'ogige ahụ n'onwe ya.
Ugwu a ọ dị n’agbata Pakistan na China ma tụọ mita 8.611. A na-egbukarị ya edekarị K2 a na-enyekwa aha ahụ site na akara ngosi nke Great Trigonometric Survey nke British India. N'oge ahụ, ọ dị ka ugwu ahụ enweghị ezigbo aha, ya mere aha ahụ nọgidere.
Ọtụtụ ndị na-akpọ ugwu a «ọhịa» na n'eziokwu, ọ bụrụ na ị hụrụ ọhụụ ọhụrụ nke ihe nkiri Limit Point (Agbaji ebe), ọ ga-adị gị mma. Ihe nkiri '90s, nke Keanu Reeves na-eme ihe nkiri, nwere ndị nwere nsogbu dị egwu dị ka ndị na-akwado ya mana na remake surfers na-arị ugwu. Ma n'ebe ahụ K2 na-abanye n'ọnụ ụzọ ya.
Ọ na-ewere dị ka a ugwu tara akpụ, siri ike ịrịgo, karịrị nwanne ya nwaanyị nke tọrọ. O yiri ka K2 tO nwere ọnụọgụ ọnwụ nke abụọ n'ihe gbasara ịrịgo ugwu n'etiti ugwu niile gbara gburugburu mita 800 n'ịdị elu. Ọnwụ 77 gụrụ na ngụkọta nke ịrị elu 300 gara nke ọma n'elu.
Otu ozi: agaghi erughi elu na udu mmiri rue 2020.
Ugwu a dị n'ime Himalaya, n’agbata Nepal na India, ọ dịkwa mita 8.586. Atọ nke ugwu ya dị na mpaghara n'etiti mba abụọ ahụ na abụọ ndị ọzọ dị na Mpaghara Taplejung, na Nepal.
Nke a ọ bụ ugwu kachasị elu n’ụwa ruo n’afọ 1852 Ma ọ bụghị n'ihi na a maghị ịdị adị ma ọ bụ ịdị elu nke Everest, mana n'ihi na emeghị ngụkọta oge ahụ ihe ezighi ezi. Mgbe ọmụmụ ọhụrụ a chọpụtara na, n'eziokwu, ugwu Kangchenjunga abụghị nke kachasị elu n'ụwa ... ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke atọ!
Ọzọkwa na Himalayass, n’etiti Nepal na Tibet. O nwere mita 8.516sy bu ugwu di oke ama ama n’ihi ọ dị ezigbo nso ịrị everest. Thezọ aga n’elu Lhotse bụ otu nke na-arịgo Everest, site na Everest Base Camp, ruo mgbe ọ gafere ogige 3, wee gafee Reiss Corridor si Lhotse Face, site na ebe a na-erute nzuko.
Anyị nwere ike ịsị na Lhotse bụ ihe dịka nwanne nwoke nke Everest. Ọ bụ ihe na-adịchaghị mma ma yabụ na-anaghị enwekarị igwe mmadụ. N'ikpeazụ, ọ ruru elu ya na 1956, site n'aka njem ndị Russia.
Ugwu a dịkwa na Himalaya n’agbata Nepal na Tibet, ọ dịkwa mita 8.485. Ọ bụ ugwu nke atọ nke gafere mita 8000 na Everest massif, na Nepal. Njem njem ndị France rutere elu ya na 1955 na nke mbụ ya.
Ọ dị ezigbo mkpa n'ihi na ngụkọta nke ndị nyocha 10 biliri ebe ahụ, mgbe ihe a na-eme n'oge ahụ bụ na otu ma ọ bụ abụọ n'ime ndị otu niile nwere obi ụtọ.
Ọ dị na Himlaayas, n’agbata Nepal na Tibet, ọ dịkwa mita 8.188. Ọ nwere nọmba isii dị n'etiti ugwu kachasị elu n'ụwa ma ọ bụ nke anọ n'ime otu nhọrọ nke ugwu nke 8 puku mita.
Ọ bụ "ezi" ugwu, ebe ọ bụ ezie na ọ dị elu ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mfe ịrịgo. N'ihi gịnị? Maka na ugwu ya dị nwayọ ma nwayọ nwayọ nwayọ. Na mgbakwunye, ọ dị nso na Nang La Pass, kilomita ole na ole site na ụzọ ahia a na-ewu ewu n'etiti Tibet na Khumbu Sherpas.
Ugwu a dị na Nepal ma dị mita 8.167. Ọ dị oke nfe ma na nke izizi bidoro na Mee 13, 1960. Ọ bụ ihe a ma ama n'ime Annapurna Circuit n'ihi na ọ dị ka ọ zuru oke.
The Annapurna Circuit bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ trekking, ihe kachasị mma ị nwere ike ime. Ọ bụ nnukwu ụzọ dị na Himalaya na-ekpuchi kilomita 145 nke ugwu ugwu. Gaa na Thorong-La, nke dị mita 5.416, nke kachasị elu na ụwa, ị ga-abanye na Kali Gandaki Canyon, nke kachasị omimi n'ụwa, okpukpu atọ karịa Grand Canyon ...
Ka o sina dị, ugwu ahụ dịpụrụ adịpụ, nkewapụrụ site na ndị ọzọ nke ụwa site na otu ndagwurugwu ahụ, yabụ akwụkwọ ozi ahụ bụ ihe ịtụnanya na oke.
Ugwu Ọ dị na Nepal ma rute mita 8.163 n'ịdị elu. Aha ya sitere na Sanskrit «manaasa«, Nke pụtara mkpụrụ obi ma ọ bụ ọgụgụ isi. Toshio Imanishi na Gyalzen Norbu bu ụzọ gbalịa iru elu ha na Mee 9, 1965, na njem ndị Japan.
Ighare ya abụghị nke esemokwu. Ọ dị ka ndị obodo ahụ dọrọ ndị njem ahụ aka na ntị ka ha ghara ịbịakwute ihe niile, n'ihi na mbọ ndị gara aga kpasuru chi iwe ma mepụta nnukwu mmiri gburu mmadụ 18 ...
Ndị njem ahụ nyere ego iji wughachi ebe obibi ndị mọnk ahụ e gwepịara egwepịa, mana ka enweghi ihu ọma na Emere nzukọ ahụ naanị na njem ọhụụ ndị Japan mana na 1971.
Ugwu a di elu Ọ dị na Pakistan ma dịrị mita 8.126. Ọ dị n'ime Mpaghara Mpaghara, na Gilgit Baltisan Mpaghara, ọdịda anyanwụ nke Himalayas. Aha ya sitere na Sanskrit ma putara "ugwu gba ọtọ."
Ọ bụ ugwu di elu, nke ndagwurugwu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara gburugburus n'ebe niile. Ihu Rupal mara mma, nke ogologo ya dị mita 4.600 site na ntọala ya.
Ugwu a dị na Nepal ma dị mita 8.091. Ọ bụ otu n'ime ugwu kachasị ama ama n'ụwa ma ọ bụ n'ihi kpakpando trek na anyị kwurula banyere ya. O nwere ike ịbụ na ọnọdụ 10 mana ọ dị mwute nwere ọnụọgụ ọnwu kachasị elu n'etiti ndị na-arị elu na ndepụta niile na anyị ka depụtara.
32% nke mgbalị iru isi njedebe na ọnwụ. Ihe okirikiri ihe ọ na-eme na-agagharị ugwu ahụ ma nye echiche site na Dhaulagiri ruo n'ugwu nke Annapurna Massif. Enwere ụzọ esi aga ebe nsọ Annapurna, nke bụ onye ọzọ karịa Base Camp, iji gaa n’ihu ịrị elu ya, bụ nke ama ama.
Ruo ugbu a, anyị bịara ugwu 10 kachasị elu n'ụwa. Ma ihe nọmba 11 bụ? Ugwu Gasherbrum I, na ókè-ala n'etiti China na Pakistan, na 8.080 mita.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Ugwu 10 kachasị elu n'ụwa